Ciyaartii Brazil iyo Argentine oo muran u baaqatay | Berberanews.com
Home CAYAARO Ciyaartii Brazil iyo Argentine oo muran u baaqatay
Ciyaaro-(Berberanews)-Xulalka Brazil iyo Argentina ee isreeb-reebka Koobka Adduunka ayaa la joojiyay daqiiqado uun ka dib markii ay bilaabatay Axaddii ka dib markii saraakiisha caafimaadka Brazil ay ka soo horjeesteen ka qeybgalka saddex ciyaartoy oo reer Argentina ah oo ay rumeysan yihiin inay jebiyeen xeerarka karantiilnimada.
Kooxda martida ahayd ayaa ka baxday garoonka Corinthians Arena kadib markii saraakiishu ay u soo baxeen inay joojiyaan ciyaarta.
Faragelinta layaabka leh ayaa timid saacado kadib markii mas’uuliyiinta caafimaadka ee Brazil ay sheegeen in afar ciyaartoy oo fadhigoodu yahay England una dhashay Argentina ay karantiil ku samaynayaan.
Ma jiro waqti la qaban doono kulanka dib loo dhigay iyadoo ciyaartoyda Argentina ay baxayaan si ay ugu diyaar garoobaan isreebreebka Koobka Adduunka ee soo socda – oo ay gurigooda kula ciyaari doonaan Bolivia Jimcaha, 10ka Sebtember.
Fifa ayaa xaqiijisay hakinta ciyaarta, waxayna intaas ku dartay in “faahfaahin dheeraad ah lala socon doono waqtiga ku habboon”.
Previous articleXogta kooxda Daliban oo qabsatay Dooxada Banshiir
Next articleMadaxweynaha Somalia oo shaqada ku celiyay Fahad Yaasiin